पुत्र, पिता र क्रान्तिकारीता
शहरमा एउटा गाँइगुई सुनिन थालेको छ अचेल, कि माओवादी सुप्रिमो अध्यक्ष कामरेडका पुत्रले पार्टीकी एक महिला कार्यकर्तालाई उछिट्टियाए रे ! हुन त बेलाबेलामा बाउछोराका विषयमा निकै गर्मागर्मी कुरो बाहिर आएकै हुन । त्यसकारण पनि यो पछिल्लो कुराले उति गम्भीर अर्थ नराख्ला कतिपयलाई । तरपनि नेपाली संस्कारको त कुरै छाड्दिम क्रान्तिकारीतको बख्यान गरेर नथाक्ने माओवादी पार्टीका अध्यक्षका छोरा अझ एक जिम्मेवार माओवादी कार्यकर्ताले नै कम्युनिष्ट चरित्रको धज्जी उडाएकाले सायद शहरमा यस्तो चर्काचर्की बहस चलेको हुनुपर्छ । यो चर्चा कहिले गएर सेलाउँछ त्यो मैले जान्ने कुरो भएन ! तर मलाई लागेको कुरा प्रचण्डपुत्रले आफ्नो पिताको लागि केहि राम्रो त गर्न सकेनन् बरू आफ्नो पिताको “बचेखुचेको” ईज्जत, शान, शौकत बागमतिमा लगेर सेलाईदिए !
आफ्ना पिता प्रधानमन्त्री हुँदा पिताको सहयोगी भएर देशविदेश भ्रमण गर्ने अत्यन्तै दुर्लभ अवसरहरु पाएपछि यिनलाई लागेको हुँदो हो – म भनेको प्रधानमन्त्रीको छोरो ! ऐश आराम भोग गर्न जन्मेको ! हुनपनि बाउले नै छोराको बानी बिगारेपछि अरुले जे पनि लाग्ने कुरो भएन । मलाई अचम्म लाग्छ, प्रचण्ड जस्तो एउटा भिमकाय ब्यक्तित्व निर्माण गरेको मान्छेले कुन क्षमता देखेर आफ्ना छोरालाई यस्तो अवसर दिए कुन्नी ? के छोरा हुँदैमा ऊ बाबाका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न योग्य नै हुन्छ ? सायद यो प्रचण्डको क्रान्तिकारी सैद्धान्तिक बुझाई हुन सक्दछ । यसमा बढी टिप्पणी नगरुँ । तथापि प्रकाश यस्तो हुनुमा सबभन्दा बढि जिम्मेवार प्रचण्ड हुन ।
“लौ बाऊ म देशमा शान्ति र संविधानका लागि सगरमाथा चढ्छु । सरकारलाई सहयोग माग्दिनु पर्‍यो !” छोराको ख्वाहिस सुन्दासाथ रक्सीको नशामा चूर हुने छोरा सुध्रिएछ लौ अब यो पनि देश र जनताका बारेमा सोच्ने भएछ भन्ने लाग्यो होला विचरा पिताजीलाई आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकारलाई आदेश दिए – “लौ, हाम्रा पुत्र शान्ति र संविधानका लागि सगरमाथा चढ्ने ख्वाहिस राखिरहेछन् दुई चार करोड ब्यवस्था गर्नु पर्‍यो !” आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान बनाउने आफ्ना मालिकका खातिर हाम्रा डाक्टर पछि हट्ने कुरै भएन । आखिर सुप्रिमोको आज्ञा हो । भनिदिए – “हस मालिक ! कति चाहिएला प्रकाशबाबुलाई ?” मुख्य कुरो यहि बाट बिग्रेको छ । प्रचण्डको खास स्खलन यहिनेरबाट भएको छ । यहि विन्दुमा आईपुगेपछि प्रचण्डले आफ्नो राजनैतिक प्रतिष्ठा त धुमिल बनाए बनाए, आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई बिग्रने बाटोतिर लाग्न प्रोत्साहन पनि गरे । यता बाबा चाँहिलाई लाग्यो छोरो सगरमाथा चढ्न हिड्यो शान्ति र संविधानका लागि उता छोराले शान्ति र संविधानलाई गोली मार्‍यो । बिनालाई काखी च्याप्यो र आफ्नो उन्मत्त यौवनको प्यास बुझायो । परिणाम अहिले छोराले दुर्नाम गर्‍यो उसको क्रान्तिकारीताको !
यसबाट सबैले एउटा पाठ सिक्नु जरुरी छ – सन्तान भनेका आफू विनाका हुन् । अहिले देखिनै आफ्ना सन्तानको उज्ज्वल भविष्यका बारेमा सोचौं । नत्र पछि सुप्रिमो झैं पछुताउनु पर्ला !
युवा पत्रकार.... साथि निराजन सरलार्इ मेरो ह्दय देखिनै धन्यबाद दिन चाहन्छु किन भने उहाको बिभिन्न् लेख अनि रचनाहरू मैले पढ्ने गर्छु साच्चै नै एकदम मार्मिक अनि पढिरहु जस्तो लाग्छ यसरि नै सर साच्चै हजुरको हातमा कलम चलिरहोस यहि मेरो शुभकामना छ हजुरलार्इ अझ अझ प्रगति गर्दै जानुस अबश्य सगरमाथामा पुग्नुहुन्छ यहि मेरो शुभकामना छ हजुरलार्इ है